IPharadesi Lomthandi Wemvelo - I-Riverside Cabin, i-Mindo
San Miguel de los Bancos, Pichincha, i-Ecuador
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Lynne
Ikhabethe elithokomele eliseceleni lomfula elakhiwe ngezandla, eliphakathi kwezimila eziluhlaza okotshani, ngasemfuleni i-Saguambi. Iphelele ngechibi layo lokuhlobisa, lena indawo ekahle yokuhlehlisa futhi uphumule izinsuku ezimbalwa. Njengekhaya lezinhlobo eziningi zezinyoni nezimvemvane, abathandi bemvelo bayomangala lapho bebona indawo enokuthula. Ikhabethe linokuhamba kalula nje okuyimizuzu emi-3 ukusuka enkabeni ye-Mindo, kodwa libekwe endaweni eseceleni ukuze uzizwe sengathi ukude ngamamayela ayisigidi.
Ikhabethe linekhishi elincane kodwa elihlome kahle elinesitofu, ihhavini nesiqandisi/ifriji, igumbi lokugezela eligcwele elineshawa kanye negumbi lokugezela elinguhhafu phezulu. Igumbi lokulala linombhede ongu-Queen, umbhede osofa oyedwa kanye nomatilasi owengeziwe. Iphinde ibe nompheme obanzi ogoqekile onama-hammocks ukuze izivakashi zijabulele izimangaliso ze-cloudforest esanda kwenziwa ingxenye ye-UNESCO Choco-Andino Biosphere Reserve.
Ikhabethe lilungele imibhangqwana, noma imindeni emincane (abadala abangu-2 kanye nezingane ezi-2 max.).
I-Acogedora cabaña junto al río, rodeada de exuberante vegetación por el río Saguambi. La cabaña tiene la comodidad de estar solo 3 minutos a pie del centro de Mindo, pero está escondido en una zona apartada llena de árboles nativos y vegetación para que te sientas muy alejada.
I-La cabina es perfecta para parejas o familias pequeñas (2 abadala y 2 niños como máximo).
Umbhede omkhulu ongu-1, 1 umbhede wosofa, 2 osofa, Omatolasi abangu-1
Le ndawo ibizwa ngeLa Isla futhi yaziwa njengendawo yokuphephela i-Rufous MotMot evame kakhulu lapha. Ngomfula iSaguambi, nezimila ezishisayo, iyipharadesi labathandi bemvelo. Indawo iyi-oasis ethule, eseceleni kodwa ukude nje ukuya ezitolo zekhofi nezindawo zokudlela zedolobha elincane laseMIndo.
ULynne uhlala endaweni engumakhelwane futhi uhlala ekhona ukuze amukele izivakashi futhi azibonise ngendawo yokuhlala. Uhlale ekujabulela ukuphendula imibuzo futhi anikeze izincomo zezindawo zokudlela/izinto ongazenza e-Mindo nasezindaweni ezizungezile njll.
ULynne uhlala endaweni engumakhelwane futhi uhlala ekhona ukuze amukele izivakashi futhi azibonise ngendawo yokuhlala. Uhlale ekujabulela ukuphendula imibuzo futhi anikeze izincomo…